RASMI: Garsooraha Dhex dhexaadin Doona Finalka FA Cup-ka Manchester United iyo Chelsea oo lagu Dhawaaqay – Gool FM
( England ) 24 April 2018. Xariirka Kubadda Cagta England ee FA ayaa xaqiijiyay garsooraha dhex dhexaadin doona finalka Koobka Fa Cup-ka oo dhici doona maalin sabtiya taariikhduna ay tahay, 19 bisha May.
Michael Oliver ayaa garsoori doona dheesha finalka ee u dhaxeysa kooxaha Manchester United iyo Chelsea taaso ka dhici doona garoonka Wembley.
Oliver wuxuu rigoore wadno go’ah ku abaalmariyay daqiiqadihii dambe kooxda Real Madrid ciyaartii laabad ay rubac dhamaadka koobka Champions League Juventus la ciyaareen.
Halyeeyga qaranka Italy ee goolka ka ciyaara Gianluigi Buffon ayaa fal celin caro leh ka muujiyay go’aan Oliver isagoona ciyaarta ka saaray goolhayaha, ka hor inta uusan Buffon garsooraha England kasoo jeeda uusan ku tilmaamin xayawaan kadib wareysi uu saxaafada siiyay ciyaarta kadib.
Balse arinta aadka u adag ayaa ah Oliver qaabke ayuu u maareen karaa xakameenta labada macalin ee Jouse Mourinho iyo Antonio Conte oo finalka iska hor imaan doono iyo hadalada uu kala kulmi karo hogaamiyaashan carada badan.
Pele Oo Ka Hadlay Lionel Messi, Isagoo Dhinaca Kale Sharaxay Halka Uu Ka Liito Neymar Jr